Budata Bitdefender Antivirus Free maka Windows
Budata Bitdefender Antivirus Free
Free Budata maka Windows (9.50 MB)
Budata Bitdefender Antivirus Free,
Bitdefender Antivirus Free bụ otu nime mmemme antivirus kachasị dị irè ị nwere ike iji nefu na kọmputa gị. Ninwe ngwanrọ dị mfe ma dị mfe, mmemme antivirus na -emere gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nchebe ọ bụla ma wepu ọgba aghara ọ bụla.
Bitdefender, nke dị na tray sistem ma na-enye nchebe ozugbo ozugbo na-enweghị ike ọgwụgwụ kọmputa gị, na-adọ gị aka na ntị ma ọ bụrụ na ọ chọpụta ihe nwere ike ime na-enyo enyo wee wepu ihe egwu ahụ site na nkwado gị. Mmemme nje a, nke na -emere gị ntọala niile dị mkpa na -akpaghị aka, ọ dịghị mkpa ịhazi ntọala ọzọ.
Bitdefender Antivirus Free, nke usoro nrụnye ya dịkwa nfe yana ngwa ngwa, na -enyocha kọmputa gị na akpaghị aka maka sọftụwia ọjọọ mgbe etinyere ya wee kpochapụ ihe egwu nwere ike ime, na -enye gị ahụmịhe ojiji kọmputa dị nchebe.
Niji teknụzụ akpọrọ njikwa nje na -arụ ọrụ, mmemme ahụ nwere ike ịchọpụta ọbụna ngwanrọ ọjọọ nke amabeghị na ọ bụ nje ma ọ bụ akọwaghị nke ọma. Ihe mmemme a, nke na -enwetakwa nkwado dị ukwuu site na kọmpụta igwe ojii, na -ewepụ nkọwa nje ozugbo na sava igwe ojii nke ya, ọ ga -ekwe omume ichebe ya pụọ ​​na nje ọhụrụ ozugbo.
Nwere ike ijide naka na echedoro ozi nkeonwe gị na nchebe gị, nihi ike ya iguzogide rootkits, iji nweta ikike mgbochi rootkit, yana igbochi ịwụfu data ngwanrọ ngwanrọ na njikọ ịntanetị. Mmemme antivirus na -akwụghị ụgwọ Bitdefender, nke na -adọ gị aka na ntị tupu ị gaa na webụsaịtị dị ize ndụ, nwere ike ịgwa gị gbasara izu ohi kaadị kredit ma ọ bụ ohi paswọọdụ aha njirimara.
Na mkpokọta, Bitdefender Antivirus Free ga -abụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ chọrọ ịgbanwe ngwanrọ antivirus ha wee nwaa ngwanrọ antivirus ọhụrụ.
Bitdefender Antivirus Free Ụdịdị
Nha faịlụ: 9.50 MB
Kacha ọhụrụ na: 29-07-2021
Ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche na-eyi egwu kọmputa anyị egwu, dịka nje, ikpuru, spyware, yana malware,...